Champions League Juventus Vs Real Madrid : Waa Kulankoodii 17-aad , Yaa Guulo Badan Halkan Ka Akhri
Champions League Juventus Vs Real Madrid : Waa Kulankoodii 17-aad , Yaa Guulo Badan Halkan Ka Akhri 0 May 05, 2015 in Wararka by Staff SLL Media Visits: 1319
Champions League Juventus Vs Real Madrid : Waa Kulankoodii 17-aad , Yaa Guulo Badan Halkan Ka Akhri kulankan Ayaa U dhaxeeya Koox aan Aan Iman Muddo Semi-Finalka Champions League Iyo Real Oo Doobaysa Inay Ilaashato Horyaalnimada Waana Kulan Oo Aan saadiishiisa aan lagu deg degi karin Juventus Ayaa kulankaan galeysa iyadoo ay niyadda u dhisan tahay ka dib markii ay ku guuleysteen markii 4-aad oo isku xigta in ay qaadaan horyaalka Italy una ah koodii 31-aad Ee taariikhooda . Hadaba warbixintaan ayay kooxda.com ku soo qaadaaneysaa xog badan oo ku jirta kulankaas adag Taariikhiyan ,
waxa ay labadaan koox kulmeen 16 jeer oo ay isku arkeen tartamada yurub 5 jeer inta aan Champins Leage loo bixin ayay kulmeen halka 11 kalana ay ku kulmeen magacaan cusub waxaana 7 jeer badisay Juve halka Real-na badisay 8 jeer xilli h hal kulanna bar bardhac galeen Markii ugu horeeysay oo ay labadaan koox wada kulmaan ayaa aheyd sanadkii 1962-dii xilligaas oo ay ku kulmeen semi finalka koobkaan . Real Madrid ayaa xilligaas lugtii koowaad ee garoonka Juve ku soo badisay hal gool halkii kulankii garoonka Real-na ay Juve ku badisay hal gool waxaana labada koox lagu kala bixiyay kulan ku celis ahaa waxaana 3/1 ku badisay Real .
Markii ugu horeeysay ee ay labadaan koox ku kulmaan Magacaan cusub ee Champions League waxa ay aheyd xilli ciyareedkii 1995/1996-dii xilligaas oo ay isku arkeen semi finalka koobkaan waxa ay Real garoonka Juve kala soo laabteen hal gool oo nadiif ah balse Juve ayaa iyana lugtii labaad ku badisay laba gool oo nadiif ah . Waxa ayna xilligaas Juve u ciyaarayay Zidane oo la qaaday Champion-ka una ahaa Juve koodii labaad uguna dambeeyay taariikhda naadiga ka dib markii finalkii ay ay kaga badiyeen kooxda Ajax ee Holland .
Labadaan koox xilli ciyaareedkii 1997/1998-dii waxa ay ku kulmeen Finalka koobkaan waxaana xilligaas qaaday kooxda Real Madrid .
Mar kale ayaa xilli ciyaareedkii 2002/2003-dii ku wada kulmeen semi finalkii Champion-ka waxaana lugtii koowaad ee garoonka Juve looga badiyay Juve 2 /1 waxaana Real u dhaliyay wiilashii Real Brazil ee Ronaldo iyo Carlos halka Juve isna uu u dhaliyay laacibkoodii reer France David Trezeguet balse lugtii labaad Juve ayaa ku badisay 3/1 waxaana kala dhaliyay David Trezeguet , Del Piero iyo Pavel Nedvěd.
Mar kale wareegga 16 -ka ayay isku arkeen sanadkii 2005-dii waxaana Juve looga soo badiyay hal gool balse lugtii labaad ayay ku badiyeen laba gool .
Juventus xilli ciyaareedkii 2008-dii muhiim ayuu u ahaa Champion-ka oo waxa ay ku soo laabteen Champion-ka ka dib hal xilli ciyaareed oo ay kooxaha heerka labaad Italy ku soo qaateen .
Xilligaas Real labadii kulanba waa ay ka badiyeen , lugtii hore laba gool ayay ku tumeen halka lugtii labaad ku tumeen 2/1 waxaana xiligaas Real u dhaliyay C Ronaldo .
Kulankii ugu dambeeyay ee labadaan koox ayaa ahaa xilli ciyaareedkii hore waxa ayna ku kulmeen wareegga Group-yada , Real ayaa lugtii hore ee garoonka Juve ku soo badisay 2/1 halkii lugtii labaad ku dhameysteen min laba gool
Haatan waa kulankoodii 17-aad toloow yaa farxad ku gali doona lugta labaad No Comments yet... Print